JIG JIGA. JAWAABTA IGA SOO BAXDAY WAFUUDA OYSU EE DALKI HOOYO JOOGTA IYO KALA WAR LA,AANTA SHACABKA DIBADA. | ogaden24
Hello, xoghaya guud ayaan ku salaamay mudane shaafi sheikh abdi shaafi shilaabo ka dib waxan weydiiyay xaaladisa caafimaad iyo nabad galyo. Jawaabta ka soo baxday waxay aheyd hadafkii loo sameeyay OYSU lama gaadhin ilaa dhamaan deegaanada iyo gobolada dalka aan soo wadda marro anigoo huwan astaanta iyo sumada OYSU. Waxan ku fikirayay calaacal iyo warar murugo leh ayaad kala kulmi doontaa xoghaya guud shaafi shilaabo balse waxaa isoo baxday hogaamiye ka fog dooda miiska saaran ee weerarkii shalay lugu beegsaday shacabka tirada badan ee wafuuda OYSU soo galbineysay. Ururka dhalinyarada iyo ardeyda somalida ogadenia wuxuu jirsaday 8 sano, waxana la xusay sanad guuradii 8aad ee ururka bishii June, waxana laga xusay dhamaan dalalka daafaha dunidda. Taageerayaasha xubnaha waxay ku xoog badan yihin gudaha dalka, wuxuna xarumo iyo xidhidh ku lahaa dhamaan gobolada dalka waana sababta hogaankii ugu sareeyay OYSU loogu casuumay inuu soo arrko dhalinyarada iyo ardeyda ku nool gudaha dalka.
OYSU waxay leedahay hadaf iyo himillo lugu soo diyaariyay Shirweynihii ururka, waxana soo ansixiyay dhamaan xubnaha ururka iyo taageerayaasha ururka ee markaasi awooday inney tallo iyo afkaar ku yeeshaan geediga loogu jirro mustaqbalka inn la soo saarro dhalinyaro bisil oo hogaamin karta shacabka dulman ee kumanaanka sano ku soo jiray duruufaha addag ee gumeysiga lagga dhaxlay. OYSU waxay dooneysaa inn la soo saarro isla markaana la xoojiyo awooda dhalinyarada iyo ardeyda dowlad deegaanka, OYSU waxay aaminsan tahay mustaqbalka dalka waxaa iskaleh dhalinyarada iyo ardeyda maanta joogta ee ubaahan midnimo iyo wada jir ku dhisan hadaf iyo himilo. OYSU waxay ka duuleysaa sooyaalka iyo taarikhda uu deegaanka soo maray laga soo bilaabo xiligii lugu wareejiyay gumeystaha dhulka somalida ogadenia. Tiirarka OYSU waxaa ka mid ilaalinta taarikhda iyo kobcinta garaadka dhalinyarada iyo ardeyda dowlad deegaanka si mustaqbalka loo hello hogaamin ka dhisan cilmiga iyo taarikhda. OYSU waa urur bulsho unna taagan mideynta iyo ilaalinta wada jir ka shacabka dowlad deegaanka. OYSU waa urur bulsho unna tagan caawinta iyo garab istaaga sida hooyooyinka, waayeelka, dumarka, culumada, Sports, Suugaanta iyo dhaqanka suuban ee islaamka inn mudnaanta hore la siiyo.
Xubnaha ururka iyo taageerayaasha OYSU gudaha iyo dibada waxan idinka codsan midnimo iyo wada jir, waxana lagga maar maan ah dhacdooyinka maalinle ee inna soo marri doona inaan waqti badan lugu bixinin balse lagga rumeeyo hadafka iyo himilada dhalinyarada iyo ardeyda dowlad deegaanka. OYSU waxaa sugeysa iney mustaqbalka soo saaraan ubixii iyo hogaamintii dalka iyo dadka hogaamin lahaa sidaasi daraaded yaa loo bixin weerarka iyo daacayada maxaa yeelay meeshaynu u socono ayaa ka mihimsan ineynu shacabka dulman soo gaadhsiino. OYSU waxaa sugeysa sidii loo mideyn lahaa dhalinyarada deegaanka gudaha iyo dibada ka dibna qorshe guda balaadhan loogu sameyn lahaa jiilalka soo socda ee ubaahan toosin, wanaajin, cadaalad iyo sinaan.